Kpoo KB Group - Kimroy Bailey Group
Kpoo ndi KB GroupKimroy Bailey2018-08-14T15:25:49-05:00
Banyere Ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ KB
Otu Kimroy Bailey Group bu nkuzi nmekorita nke uwa, ndi out ahia, ndi na ahu maka ndi mmadu noo nke oru nmeghari nke kompeni. Ndị otu KB na-ejikọ ọnụnọ ike mmeghari ohuru na Robotics na ọgụgụ isi. Otu a na-arụ ọrụ na Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, Miami na Manchester. Ka anyị na-aga n’ihu na-eto ọrụ anyị zuru ụwa ọnụ ebumnuche anyị abụghị inwe ‘BIG’, anyị chọrọ inwe mmetụta dịka ụlọ ọrụ gafee okporo ụzọ ebe ị nwere ike ịwụ elu na weebụsaịtị ha, bido mkparịta ụka ma nweta nzaghachi ozugbo. Ọ bụrụ na anyị anaghị enweta akara nke nzaghachi ozugbo, ndị otu anyị nwere ntị nke na-ege ntị, ị nwere ike Kpọtụrụ Anyị iji mpempe akwụkwọ dị n'okpuru ma ọ bụ site na email [Email na-echebe] Ndi Kimroy Bailey Group nke Ndi otu a bu nke Kimroy, nwunye ya mara mma Sherika na umu ha mara nma, Keilah Bailey. Ndị Baileys ji nganga kwere na Popsie (Chukwu) na ike nke Ọbara nke Jizọs Kraịst.
Adreesị ozi ịntanetị gị *
Kpọtụrụ Ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ KB
Na Nkata Live